Otu esi agbanye ihuenyo mkpanaka na -emetụghị bọtịnụ | Androidsis
Nerea Pereira | | Gam akporo Ndị aghụghọ
Ọ bụrụ na ọnọdụ nke ọchịchọ emeela gị gbanye ihuenyo mkpanaka mana enweghị ike ịme ya n'ihi bọtịnụ ike agbajiri, isiokwu a ga -amasị gị. Ihe na -ebutekarị bụ imebi bọtịnụ a, mana nke a anaghị adị mgbe niile ebe ọ nwere ike bụrụkwa na ọ mere gị oge ụfọdụ ịchọrọ ilele ekwentị gị mana enweghị ike ịme ya n'ihi na aka gị juru. Maka ọnọdụ ndị a, ngwaọrụ nwere ụzọ ọzọ ha ga -esi mee ya.
Ndị na -emepụta ngwaọrụ oge ọ bụla ha mepụtara ọrụ ọhụrụ na ngwaọrụ ndị enwere ike were dị ka nke abụọ mana nke ahụ dịkwa ezigbo uru. Ọ baghị uru ụdị ọrụ ọ bụ, ebe ọ na -enye onye ọrụ ozugbo nhọrọ nke inwe ike iji ya. Ma kpọmkwem taa anyị na -abịa ikwu maka aghụghọ na ọrụ iji nwee ike rụọ ọrụ ihuenyo mkpanaka na -enweghị imetụ ya aka.
1 Ụzọ iji gbanye mkpanaka na -emetụghị ya aka
1.1 Ị nwere ike iji agụ mkpịsị aka ekwentị gị
1.2 Ị nwere ike ịsị Ọ dị mma, Google na edoziri okwu
1.3 Ngwa iji hazie ya
1.4 Ị nwekwara ike ịmepụta bọtịnụ mebere
1.5 Nzọ na smart omume
Ụzọ iji gbanye mkpanaka na -emetụghị ya aka
Eziokwu bụ na enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ị ga -eji gbanye ekwentị mkpanaka na -enweghị imetụ bọtịnụ kwekọrọ. Anyị na-ekwu n'ezie maka mmeghe ihuenyo ama ama, usoro nke ngwaọrụ dị na ya mana enwere ihuenyo iji chekwaa batrị.
Na eziokwu bụ na enwere ọtụtụ ihe kpatara ịchọrọ ịgbanye ekwentị mkpanaka gị n'etinyeghị bọtịnụ ọ bụla aka. Dị ka ọmụmaatụ, ma eleghị anya, ị na-esi nri na ị na-acha ọbara ọbara, ma eleghị anya ọbụna n'ụzọ nkịtị. N'okwu a, ọ bụghị ezigbo echiche imetụ bọtịnụ ike, n'ihi na ekwentị ga -enweta mmanu mmanu na unyi nwere ike ịkpakọ na bọtịnụ na -ebute mmebi n'ọdịnihu.
Ọ nwekwara ike bụrụ na gị na ndị enyi gị ma ọ bụ ndị ị hụrụ n'anya na -ekpori ndụ n'ụsọ osimiri ma chọọ ịlele ọkwa iji hụ ma mmadụ eziterela gị ihe na -atọ ụtọ. Mana n'ezie, n'etiti ájá na mmiri nnu, ihe abụọ nwere ike imebi ekwentị gị, ọ kacha mma ka anyị zere imetụ aka aka.
Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Ọ dị mma, ọ dị mfe dị ka ịkpọghe ihuenyo ekwentị gị na -enweghị ịpị bọtịnụ kwekọrọ. Na ịhụ nhọrọ dị iche iche ị ga -echebara echiche, ọ ka mma ịnọ na nchekwa karịa nwute. Ka anyị hụ ụzọ ndị anyị họpụtara maka gị nke nwere ike ịpụ gị n'ime ọtụtụ nsogbu.
Tupu ịga n'ihu na ụzọ dị iche iche iji kpọghee ihuenyo ekwentị gị na -enweghị ịpị bọtịnụ ọ bụla, ekwesịrị ịdebe ihe ndị a. Ewezuga ụzọ ndị na -emepe ngwaọrụ na biometric, Ụzọ ndị ọzọ ga -enwe ike ịgbanye ihuenyo dị ka okwuntughe, ntụtụ ma ọ bụ ụkpụrụ ga -ebu ụzọ tinye ya nke ọma ka ekwentị mepee kpamkpam.
Ị nwere ike iji agụ mkpịsị aka ekwentị gị
N'ụzọ dị otu a ha bụ akụkụ Ụzọ mmeghe abụọ nke kacha ewu ewu na nke kacha mma bụ: ihe mmetụta mkpịsị aka na imeghe ihu. Na nhọrọ nchekwa ị nwere ike hazie ụzọ abụọ ma ọ bụ naanị otu ma ọ bụrụ na ngwaọrụ nwere naanị otu. Ozugbo ị haziri akara mkpisi aka gị ma ọ bụ ihu gị, ị ga -enwe ike ịkpọghee ngwaọrụ gị - na nke mbụ - site na imetụ ihe mmetụta aka ma ọ bụ - na nke abụọ - na -elele ihuenyo ka igwefoto n'ihu wee mepee ekwentị.
Eziokwu bụ na usoro a bụ otu n'ime ihe kachasị mma, karịa ugbu a Ekwentị etiti ọ bụla enwela sistemụ mmeghe ihu zuru oke. Agbanyeghị na usoro ịmata akara mkpịsị aka dịkwa irè, ọ dị mkpa iburu n'obi na oge ụfọdụ ị nwere ike ị gaghị achọ imetụ ekwentị aka.
Ma ọ bụ gịnị bụ otu ihe: ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na bọtịnụ mgbanaka / gbanyụọ anaghị arụ ọrụ, imeghe ihuenyo mkpanaka gị site na iji onye na -agụ mkpịsị aka bụ ezigbo echiche. Mana ọ bụrụ na ọ bụ ka ị zere imetọ ekwentị, echedịla maka ya ebe ọ bụ na ị nwere ike imebi ihe mmetụta biometric na nsogbu ahụ ga -aka nke ukwuu.
Ị nwere ike ịsị Ọ dị mma, Google na edoziri okwu
Ohaneze google onye enyemaka Ọ na -arụ ọrụ site na ụlọ ọrụ na ngwaọrụ gam akporo niile. Mana ị nwekwara nhọrọ ibudata ngwa enyemaka Alexa nke Amazon dị na Google Play. Site na onye enyemaka na -arụ ọrụ, ị nwere ike mepee ekwentị ugbu a site na iji iwu ịgbalite nnyemaaka olu, nke bụ ụzọ kachasị mma iji kpọghee ekwentị mgbe aka anyị ji ọrụ ma ọ bụ unyi. Ya mere, egbula oge na ịkụ nzọ jiri onye enyemaka Google mepee ekwentị gị n'etụghị ya aka.
Ngwa iji hazie ya
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ ochie nke na -enweghị nhọrọ ndị dị n'elu mgbe ahụ ọ ga -adị mkpa iji ngwaọrụ ndị ọzọ. Otu n'ime ihe kachasị mma (nke a kacha mara ma nwee ahụmịhe na nke a) bụ Ihu ike ndọda, nke bụ ọrụ maka gbanyụọ ngwaọrụ mgbe itinye ya n'akpa gị ma ọ bụ tinye ya na tebụl. N'ụzọ dị iche, ọ na -enwu ọkụ mgbe ị na -ewepụta ya n'akpa gị ma ọ bụ bilie. Ọ na -emekwa ka ngwaọrụ ahụ dịrị mgbe ị na -eji ya ka ọ na -achọpụta mmegharị n'aka gị.
Ike ndọda - Gbanye / Gbanyụọ
Ị nwekwara ike ịmepụta bọtịnụ mebere
Ngwa ụfọdụ nwere bọtịnụ ụlọ n'ihuenyo kama ịpị bọtịnụ ụlọ dị n'etiti. Nke a na -enye gị ohere ịpị na ihuenyo dịka ọ mere na bọtịnụ anụ ahụ, na -enweghị ịpị bọtịnụ ike. Ọ bụ ezie na maka nke a, ị ga -ebu ụzọ rụọ ọrụ ya n'ime ntọala ihuenyo, na -achọ nhọrọ "Kpọghe na bọtịnụ mmalite" ma mee ka nhọrọ ahụ rụọ ọrụ.
Nzọ na smart omume
Oge ọ bụla mobiles nwere ọtụtụ ụzọ iji mee ka ihuenyo rụọ ọrụ na -enweghị imetụ bọtịnụ ike, ụfọdụ nhọrọ nwere ihe ngwaike dịka ihuenyo ma ọ bụ ihe mmetụta. Yabụ ebe a ị nwere ike iji ụzọ abụọ nke bụ mmalite ihuenyo mgbe ị buliri ekwentị na mgbata ugboro abụọ. Ndị a bụ ọrụ dị na ntọala nnweta, ozugbo ị gbanyere ha ọrụ, ị ga -enwe ụzọ abụọ ndị a iji gbanye ekwentị na -enweghị ịpị bọtịnụ ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi agbanye ihuenyo mkpanaka na -emetụghị bọtịnụ aka